Firefox 84.0.2 inosvika kugadzirisa kunetseka kwakanyanya | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kwe vFirefox bazi 84 yekugadzirisa ersion, uko Firefox 84.0.2 chigamba chinogadzirisa kushushikana kwakanyanya (CVE-2020-16044).
Kubva pane iro data rakaburitswa, zvinongotaurwa izvo zvakati kushupika zvinogona kutungamira mukuitwa kwekodhi yakaipa kana uchigadzirisa yakanyatsogadzirirwa COOKIE-ECHO block mune iyo Stream Control Transmission Protocol (SCTP) package.
Kukanganisika kuri nekuda kwekuwana kune yakatosunungurwa memory memory nzvimbo (shandisa-mushure mekusununguka) mune iyo COOKIE-ECHO mutyairi.
Parizvino chete ruzivo irworwo rwaburitswa uye nekudaro ruzivo rwekukuvara harusati rwaziviswa.
Wezera rakaipa angadai akashandura chidimbu cheCOKOKIE-ECHO mupaketi yeSCTP nenzira ingangokonzeresa kushandiswa kwepashure-kuburitsa. Isu tinofungidzira kuti nesimba rakaringana raigona kunge rakashandiswa kuita kodhi yekumanikidza
Zvakakosha kufunga nezve izvo uku kunetseka kunokanganisa bhurawuza nenzira yakajairika zvisinei neplatifomu iyo yaakaisirwa uye ndosaka vashanduri vebrowser vachifonera vashandisi kuti vavandudze nekukurumidza sezvazvinogona.
Zvakare, zvinotaurwa zvakare kuti lShanduko dzinotevera dzinosanganisira kutaridzika kweFirefox 85 yebhatani «Delete all logins» mune iyo Lockwise password maneja menyu yekudzima ese akachengetedzwa mapassword kamwechete.
Firefox 86 ichadzima iyo Backspace kiyi inobata kunze kwechimiro chemafomu ekuisa nekutadza.
Kubvisa backspace handler kwakarongerwa makore manomwe apfuura uye kunokurudzirwa nenyaya yekuti kiyi yekumashure inoshandiswa zvakanyanya pakunyora mafomu, asi kunze kwekutarisa kune fomu yekuisa iyo inoitwa sekuchinja kune peji rapfuura, nekudaro izvo zvinogona kutungamira kurasikirwa kwemavara akanyorwa nekuda kwekufamba kusingazivikanwe pane rimwe peji.
Kunyangwe zvichitaurwawo kuti iyo browser.backspace_action sarudzo yakawedzerwa kune nezve: gadzirisa kudzosera maitiro apfuura.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi inogadziridza vhezheni yebrowser, unogona kutarisa izvo zvinyorwa Mune inotevera chinongedzo.
Kunze kweizvozvo isu hatifanire kukanganwa kuti inotevera yakakosha vhezheni vhezheni yebrowser yakarongerwa kuburitswa muna Ndira 26, 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 84.0.2 inogadzirisa kushushikana kwakanyanya